2 Ahene 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Ahene 20:1-21
20 Bere bi owuyare bɔɔ Hesekia.+ Na Amus ba odiyifo Yesaia+ baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Hyɛ wo fie samansew,+ efisɛ wubewu, na worentena ase.’”+ 2 Ɛnna ɔde n’ani kyerɛɛ dan+ bɔɔ Yehowa mpae+ sɛ: 3 “O Yehowa, mesrɛ wo, kae+ sɛnea mede nokwaredi+ ne koma mũ+ anantew+ w’anim, na mayɛ nea ɛsɔ w’ani+ biara.” Na Hesekia sui pii.+ 4 Na ɛbae sɛ Yesaia nnya nnuu ahemfie adiwo hɔ no, Yehowa asɛm baa ne nkyɛn+ sɛ: 5 “San w’akyi na kɔka kyerɛ me man kannifo+ Hesekia sɛ, ‘Nea Yehowa, wo nana Dawid Nyankopɔn+ aka ni: “Mate+ wo mpaebɔ+ no. Mahu wo nusu,+ na meresa wo yare.+ Da a ɛto so abiɛsa no, wobɛforo akɔ Yehowa fie.+ 6 Mede mfe dunum bɛka wo nna ho, na megye wo ne kurow yi afi Asiria hene nsam, na mɛbɔ kurow yi ho ban,+ me ne m’akoa Dawid nti.”’”+ 7 Na Yesaia toaa so kae sɛ: “Momfa borɔdɔma a wɔabɔ no tɔw+ mmra.” Enti wɔkɔfa de bɛtaree mpɔmpɔ+ no so, na nkakrankakra, ne ho san no.+ 8 Saa bere no, Hesekia bisaa Yesaia sɛ: “Dɛn ne sɛnkyerɛnne+ a ɛkyerɛ sɛ Yehowa bɛsa me yare na mɛforo akɔ Yehowa fie hɔ da a ɛto so abiɛsa?” 9 Ɛnna Yesaia kae sɛ: “Eyi ne sɛnkyerɛnne+ a efi Yehowa hɔ a ɛbɛma woahu sɛ Yehowa bɛyɛ nea waka no: Wopɛ sɛ sunsuma no kɔ anim ntrapoe du anaa ɛsan akyi ntrapoe du?” 10 Na Hesekia kae sɛ: “Ɛyɛ mmerɛw sɛ sunsuma bɛkɔ anim ntrapoe du sen sɛ ɛbɛsan akyi ntrapoe du.”+ 11 Ɛnna odiyifo Yesaia maa ne nne so kyerɛɛ Yehowa, na ɔmaa sunsuma a asian no san akyi nkakrankakra ntrapoe no so; ɛsan akyi ntrapoe du wɔ Ahas ntrapoe no so.+ 12 Saa bere no, Baladan ba, Berodak-Baladan+ a ɔyɛ Babilon+ hene no soma ma wɔde nkrataa+ ne akyɛde kɔmaa Hesekia, efisɛ ɔtee sɛ Hesekia yaree. 13 Hesekia tiee wɔn, na ɔde n’adekoradan mu nneɛma nyinaa kyerɛɛ wɔn,+ dwetɛ ne sika+ ne balsam ngo+ ne ngo pa ne n’akode korabea ne biribiara a ɛwɔ n’akorae. Biribiara nni Hesekia fie ne n’ahenni mu a wamfa ankyerɛ wɔn.+ 14 Afei odiyifo Yesaia baa Ɔhene Hesekia nkyɛn bebisaa no sɛ:+ “Asɛm bɛn na mmarima yi kae, na ɛhe na wofi baa wo nkyɛn?”+ Ɛnna Hesekia buae sɛ: “Wofi akyirikyiri asase so na ɛbae, Babilon tɔnn.” 15 Na ɔsan bisae sɛ: “Dɛn na wohui wɔ wo fie?” Ɛnna Hesekia kae sɛ: “Wohuu biribiara a ɛwɔ me fie. Biribiara nni m’akorae mu a mamfa ankyerɛ wɔn.”+ 16 Ɛnna Yesaia ka kyerɛɛ Hesekia sɛ: “Tie Yehowa asɛm yi,+ 17 ‘“Hwɛ! Nna bi reba, na nea ɛwɔ wo fie+ a w’agyanom de asie abesi nnɛ no nyinaa wɔbɛfa akɔ Babilon.+ Biribiara renka,”+ Yehowa asɛm ni. 18 “Na wɔbɛfa+ w’ankasa wo mma a wobefi wo mu aba, mmofra a wobɛwo wɔn, no mu bi akɔ ma wɔakɔyɛ nhenkwaa+ wɔ Babilon hene ahemfie.”’”+ 19 Ɛnna Hesekia ka kyerɛɛ Yesaia sɛ: “Yehowa asɛm a woaka no ye.”+ Na ɔtoaa so kae sɛ: “Sɛ asomdwoe ne nokware+ bɛtena hɔ wɔ me bere so a, eye,+ anaa meboa?” 20 Hesekia ho nsɛm a aka ne ne nnwuma akɛse nyinaa, sɛnea ɔyɛɛ ɔtare+ ne suka,+ na ɔde nsu baa kurow no mu no, wɔakyerɛw wɔ Yuda ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 21 Na Hesekia ne n’agyanom kɔdae,+ na ne ba Manase+ bedii n’ade.
2 Ahene 20